တစ်နိုင်ငံလုံး အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသည်
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ဖွညျ့စကျ၊ , ၅ ဂါလန်ဘူးများကို ရေဖြည့်ပေးသောစက်
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAQGF 150
VAQGF 150 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine of Viet An company with the feature of special quantitative filling with absolute precision, this product has satisfiedalot of customers in the beverage business. With the design of automatic operation, this filling machine is much more productive than conventional filling ones.
VAQGF 150 3-in-1 automatic jar filling machine is the most advanced jar filling machine imported and distributed by Viet An Joint Stock Company in Vietnam and exported to ASEAN countries. These state-of-the-art machines are manufactured with the modern technology of the United States and assembled in Shanghai-China according to ISO 9001-2015.
VAQGF 150 ဖြည့်စက်၊ဘူးတွေပုလင်းတွေကို လောင်းထည့်ပေးသောစက်က ဗီယက်နမ်မှ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး အရေအတွက် တိတိကျကျ လောင်းထည့်ပေးတဲ့ စပါယ်ရှယ်လက္ခဏာများ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကအချိုရည်ထုတ်လုပ်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေကို အကြိုက်တွေ့စေပါတယ်။ ဒီစက်မှာ အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဒီဇိုင်းပါတာကြောင့် တခြားစက်တွေထက် ပစ္စည်းများ ပိုပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
VAQGF 150 စက်ဟာဆိုရင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ Viet An Joint Stock ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေတာဖြစ်ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများကို တင်ပို့ရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မီစက်တွေကို United States ရဲ့ ခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံ Shanghai ရဲ့ ISO 9001-2015 အတိုင်း တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
Application of 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine VAQGF 150
VAQGF1503in 1 ဖြည့်စက်၊ဘူးတွေပုလင်းတွေကိုအော်တိုလောင်းထည့်ပေးသောစက်၏ပရိုဂရမ်
VAQGF 150 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine is used to pour water intoa20L jar withacapacity of 150 jars / hour.
The machine is designed with intelligent protection mechanism, when there is no jar, the machine stops working and does not fill, helping to handle the situation of empty jars or jar-stuck problems. In such situations, the system automatically prevents the pumping system from discharging the material, minimizing the loss of water.
VAQGF 150 automatic 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine automatically cleans, fills and caps inaclosed cycle, greatly reducing labor in the production process, achieving high efficiency and high quality. This machine is the best choice compared to the same type of products on the market
The machines in the production line are highly automated, people only participate in as operators, providing the best productivity; and for power safety measures, all systems are designed against shock and other electrical devices also meet the international standards. There is also an emergency shutdown button when something goes wrong.
VAQGF 1503in 1 စက်သည် ၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၁၅၀ ကို ၁ နာရီအတွင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစက်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်။ ဘူးတွေပုလင်းတွေ မရှိတဲ့အချိန် စက်က လောင်းထည့်ခြင်းကို အော်တိုရပ်တန့်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမျိုးဘူးတွေပုလင်းတွေ မရှိတဲ့အချိန် စက်ကလောင်းထည့်ခြင်းကို အော်တိုရပ်တန့်လိုက်မှာဖြစ်လို့ ရေတွေအရည်တွေဆုံးရှုံးမှု နည်းစေမှာပါ။
ဒီစက်က အော်တိုသန့်ရှင်းပြီး ဖြည့်ပေးနိုင်တာကြောင့် အလုပ်သမားအင်အားလည်း လျှော့ချနိုင်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားမျိုးတူပစ္စည်းတွေနဲ့စာရင် ဒီစက်ဟာ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုမှာဆိုရင်လည်း စက်တွေကို အမြင့်ဆုံးအော်တိုလုပ်ဆောင်ပြီး လူတွေက အကောင်းဆုံး ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ဖို့ အော်ပရေတာတွေအဖြစ်သာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ပါဝါလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုရင်လည်း စစ်စတန်တွေ အကုန်လုံးကို ရှော့ခ်မဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ထားပြီး တခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားခဲ့ရင်လည်း အရေးပေါ်ပိတ်တဲ့ ခလုတ်ပါရှိပါတယ်။
Stages of 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine VAQGF 150
VAQGF1503in 1 ဖြည့်စက်၊ဘူးတွေပုလင်းတွေကိုအော်တိုလောင်းထည့်ပေးသောစက်၏ အဆင့်များ
VAQGF 150 includes3main stages:
1. Automatic jar cleaning: Jars with their caps taken off will be transferred to the jar chain moving along the conveyor to the automatic pressure jar coating unit, where the jars will be fixed on the coating tray by the jar holder. Conveyor motors help conveyors rotate inafixed direction to speed up the cleaning process. 304 stainless steel head pump, pure water and sterilized ozone pump are used to pump high pressure into the jar to make all bacteria in the jar sterilized to ensure the jar 100% clean.
VAQGF1503in1ဖြည့်စက်၊ဘူးတွေပုလင်းတွေကိုအော်တိုလောင်းထည့်ပေးသောစက်မှာ အဆင့် ၃ ဆင့် ပါရှိပါတယ်။
၁။ ပုလင်းကို အော်တိုသန့်ရှင်းပေးခြင်း-အဖုံးမပါတဲ့ ပုလင်းတွေဘူးတွေကို သယ်ယူပေးတဲ့စက်နားမှာရှိတဲ့ ပုလင်းအတန်းဆီကို ပို့ဆောင်ပေးပြီး အဖုံးတွေကို အော်တိုတပ်ဆင်ပေးပါတယ်။ သယ်ယူပေးတဲ့စက်မော်တာက တသတ်မတ်လမ်းအတိုင်း လည်ပတ်ပြီး သန့်ရှင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မြန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ 304 အစွန်းခံသံမဏိက ရေစုပ်ခြင်း၊ရေသန့်ခြင်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ ပိုးသတ်ပေးတဲ့ အိုဇုမ်း ရေစုပ်စက်တွေက ပုလင်းတွေထဲကို အားပြင်းပြင်းစုပ်ထည့်ပြီး ပုလင်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သေစေပြီး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း သန့်ရှင်းစေပါ တယ်။
2. Jar filling:1 filling tap of 304 stainless steel has the effect of filling water into jars according to the pre-installed level on the control panel. The pressure spring system carries water to the filling tap. Combined with the 304 stainless steel head pumping system, it creates pressure to filling the water.
၂။ဘူးများကိုဖြည့်ပေးခြင်း- 304 အစွန်းခံသံမဏိပိုက်ခေါင်းမှဖြည့်ခြင်းက control panel မှာ ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ pressure spring စစ်စတန်က ရေတွေကို လောင်းထည့်ပေးတဲ့ ပိုက်ခေါင်းဆီကို ပို့ပေးတယ်။၄ 304 အစွန်းခံသံမဏိရေစုပ်စစ်စတန်နဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ ရေဖြည့်ဖို့ လေဖိအားတွေ ဖန်တီးပေးတယ်။
3. Automatic jar capping: VAQGF 150 hasajar capping unit for non-threaded small-neck jars, combined witha304 stainless steel conveyor assembly witharoller system. There isadevice to move the caps into the capping unit andahydraulic cylinder to push the jars out.
၃။အော်တိုအဖုံးတပ်ဆင်ပေးခြင်း:VAQGF150ကဘူးပုလင်းအပုလေးတွေအတွက် 304 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူပေးတဲ့စက်ကိရိယာနဲ့ပေါင်းစက်ပြီး အော်တိုအဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ယူနစ်ရှိတယ်။ အဖုံးတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ယူနစ်တွေဆီ ရွှေ့ပေးပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါက ပုလင်းတွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။
VAQGF150 jar filling and capping machine withacapacity of 150 jars/hour has an extremely intelligent design. Besides the3automatic stages mentioned above, you can expand up to 12 automatic stages to minimize labor costs and improve productivity in the most optimal way.
Here are some other automatic steps that you can integrate into the VAQGF150 jar filling and capping machine.
အခြားအော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အဆင့်များ: သီးခြားပေးချေခြင်း (ရွေးချယ်နိုင်)
VAQGF 150 မှာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ အဆင့် ၃ ဆင့်အပြင် အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချဖို့နဲ့ ပိုပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ နောက်ထပ်အော်တိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အဆင့် ၁၂ ဆင့်ထိ တိုးချဲ့နိုင်တယ်။ VAQGF 150 မှာ ထပ်ပြီးပေါင်းစပ်လို့ရမယ့် တခြားအော်တိုအဆင့်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
1. Automatic cleaning inside and outside of the jar, automatic decapping machine
With the advanced and compact design, BS-1 automatic cleaning inside and outside of the jar, automatic decapping machine will help you to remove the caps from the jars. Clean soil, dirt and dust from the outside and inside of the jar before reusing them.
+ BS-1 automatic cleaning inside and outside of the jar, automatic decapping machine has the following components: panel system, 1 cap retractor head, 1 pedal switch, inside and outside cleaning chamber.
ဘူးပုလင်းအတွင်းအပြင်ကိုအော်တိုသန့်ရှင်းပေးခြင်းနှင့်အဖုံးများခွာပေးခြင်း(BS1)တိုးတက်ပြီးသပ်ရပ်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အတူဘူးပုလင်းအတွင်းအပြင်ကိုအော်တိုသန့်ရှင်းပေးခြင်းနှင့် အဖုံးများခွာပေးခြင်း (BS-1)က ပုလင်းအဖုံးတွေကို ဖယ်ပေးခြင်း၊ ပုလင်းအတွင်းအပြင်မှာရှိတဲ့ ဖုံတွေ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ BS-1 မှာဆိုရင် panel system၊ အဖုံးခွာပေးတဲ့ စက်တစ်ခု၊ ခြေနင်းခလုတ်တစ်ခုနဲ့ အတွင်းအပြင် သန့်ရှင်းပေးတဲ့အခန်း ပါရှိပါတယ်။
Operating mechanism of BS-1 machineOperating mechanism of BS-1 machine
• This machine is connected toapower source.
• Workers put 20-liter jars in place to retract the caps.
• Step on the pedal switch. Under the effect of the cap retracting cylinder, the caps will be removed from the jar intact without deformation and put into the cap container for reusing.
• The 20-liter jars, after being removed, will be put into the cleaning chamber. In this chamber, the water pump system starts to work, water will be put into the machine, at the same time the brush system works clockwise. Under the action ofabrush, the 20-liter jar also moves inaclockwise direction. Thanks to the outer brush, bottom brush and inner brush, the jar will be cleaned inside out.You can use the water source of the RO membrane or tap water to clean the jar inside out.
BS-1 စက်၏ လုပ်ဆောင်ပုံ
• ဒီစက်က ပါဝါအရင်းအမြစ်တစ်ခုနဲ့ ဆက်ထားတယ်။
• အလုပ်သမားတွေက ၂၀ လီတာပုလင်းတွေကို အဖုံးခွာဖို့ နေရာမှာ ထားပေးရပါတယ်။
• ခြေနင်းခလုတ်ကို နင်းလိုက်ပါ။ အဖုံးတွေ ပြန်ခွာပေးတဲ့ ဆလင်ဒါက အဖုံးတွေခွာတဲ့အခါ ပုလင်းတွေကို ပုံစံမပျက်စေတဲ့အတွက် ပြန်ပြီး အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
• ၂၀ လီတာပုလင်းတွေကို အဖုံးတွေ ခွာပြီးတဲ့အခါ သန့်ရှင်းပေးတဲ့ အခန်းထဲကို ထည့်ထားရပါမယ်။ ဒီစက်ထဲကို ရေထည့်ရပါမယ်။ဒါမှ ရေစုပ်စက်က စတင်လုပ်ဆောင်ပြီး brush system ကလည်း နာရီလက်တံပြောင်းပြန် စတင်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်း အပြင်နဲ့ အောက်ခြေက brush တွေကြောင့် ပုလင်းတွေရဲ့ အတွင်းထဲမှာ ရှင်းလင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
RO membrane သို့မဟုတ် tap water ကို အသုံးပြုပြီးလည်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Technical specifications(နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များ)
Cleaning head(သန့်ရှင်းစက်) 1
Electricity supply(လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 1.1kw
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 770x800x1150
This machine is designed for the purpose of detecting strangle objects in jars according to probability. Machine consists ofalight system andalight storage frame.
With the cost of only 59 USD, Viet An recommend that you should invest in this DJ-100 light inspection machine to ensure the quality of jar water produced by your facility.
ဒီစက်က ဘူးတွေ ပုလင်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရာဝတ္တုတွေကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာဆိုရင် အလင်းရောင် စစ်စတန်နဲ့ အလင်းရောင် သိုလှောင်တဲ့ ဖရိန်တွေ ပါပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Viet An ကုမ္ပဏီကတော့ DJ-100 ကို သုံးဖို့အကြုံပြုချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် 59 USD ပဲ ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ပါ။
3. Steam Membrane Shrinking Machine for Jars (SK-300)
This machine consists ofaboiler andashrink chamber.
Advantages: membrane shrinkage speed is fast, evenly, the membrane does not wrinkle, easily adjust the jar shrinkage capacity. The chamber is made of high-quality 304 stainless steel, the bottom of the chamber hasawater collection pit.
ဒီစက်မှာ ရေနွေးအိုးနဲ့ ကျုံ့စေတဲ့ အကန့် ပါဝင်ပါတယ်။
ကောင်းကျိုးများ: အမြှေးပါးက တွန့်မသွားဘဲ ရှုံ့တဲ့နှုန်းက မြန်ပါတယ်။ ပုလင်းရဲ့ ရှုံ့ခြင့းကိုလည်း ထိန်းပေးတယ်။အဲ့ဒီအကန့်ကို အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး အောက်ခြေမှာတော့ ရေစုဆောင်းတဲ့တွင်းလေး ပါပါတယ်။
This machine can be easily operated.
First: A 20-liter water jar, after being filled and capping, will be putamembrane into the jar body.
Then the 20-liter jar will be conveyed by the conveyor system through the steam membrane shrinking machine. Inside the shrink chamber, there are small vents, the amount of heat from the boiler will be put into the shrink chamber through the pressure regulating valve system to heat the membrane to adhere to the jar body.
ဒီစက်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ ဖြည့်ထားပြီး အဖုံးတပ်ထားသော ၂၀ လီတာ ပုလင်းထဲကို membrane ထည့်ရပါမယ်။
ထို့နောက် ထိုပုလင်းတွေကို သယ်ယူပေးတဲ့ကိရိယာကနေ သယ်ယူသွားပြီး steam membrane shrinking machine ကနေ ဖြတ်ရပါမယ်။
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 18
4. Heat membrane shrinking machine (SK-300E)
အပူဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
Máy co màng nhiệt SK-300E ရေနွေးငွေ့ဖြင့်အ​မြှေးပါးရှုံ့စက် (SK-300)
It isatype of machine used to shrink membrane for 20-liter jars using heat. With smart design, the machine has an automatic temperature control system. To ensureafixed temperature level within the shrink chamber. The machine is durable with fast shrinking speed
ဒီစက်က အပူနဲ့ membrane ကို ရှုံ့ပေးတါဖြစ်ပါတယ်။ဒီစက်မှာ စမတ်ကျတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ အော်တို အပူချိန်ထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ပါပါတယ်။ရှုံ့တဲ့အကန့်ထဲမှာတသတ်မတ်တည်းရှိတဲ့အပူချိန်ထားရှိရပါမယ်။ဒီစက်ကအမြန်နှုန်းကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
အပူဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ သတ်မှတ်ချက်များ
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 18
Price (USD)( ဈေးနှုန်း)
5. Stainless steel conveyor (for jars containing water) CSSG-4
CSSG-4 ရေပါတဲ့ပုလင်းတွေအတွက် အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ
Stainless steel conveyor (for jars containing water) CSSG-4 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ (ပုလင်းများအတွက်) CSSG4)
Application: 304 stainless steel conveyor is used to move the 20-liter jars after they are filled with water
Benefits: Durable, time-saving, labor-saving. Moving the water jars inafast speed with high productivity
Application: 304 အစွန်းခံသံမဏိသယ်ယူတဲ့ကိရိယာက ၂၀ လီတာပုလင်းတွေကို ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါ ရွှေ့ဖို့အသုံးပြုပါတယ်။
Benefits:ကြာရှည်ခံတယ်၊အချိန်ကုန်သက်သာတယ်၊အလုပ်သမားတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်။ပုလင်းတွေကိုလည်း မြန်မြန်ရွှေ့နိုင်လို့ အရေအတွက်များများ ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။
(CSSG-4 ရေပါတဲ့ပုလင်းတွေအတွက် အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ)
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 0.75
Technical specifications ofa3 in 1 automatic filling and capping machine VAQGF 150
VAQGF 150 ရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များ
Capacity of the machine is from 120-150 jars per hour.
The operating pressure of the machine on the whole process reaches 0.45-0.6Mpa, the pressure applied to the three stages of cleaning, filling or capping is guaranteed with absolute accuracy.
Size of the machine (LxWxH): 2800x980x1700(mm); with this size, the automatic 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine VAQGF 150 does not take too much area, designed with inox 304 making the machine always shiny and easy to clean as well as the service life of the machine is over 15 years
The machine is smartly designed to save power up to an electrical capacity of only 1.92Kw/h
VAQGF 150 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine is applicable for jars withasize of Ф276x490
In order for the device to operate at its best, customers also need to preparea3-phase power source with the input power of 380V.
Weight of VA 3F automatic3in 1 jar filling and capping machine reaches 225 Kg, which is convenient for transport and installation.
ဒီစက်က တစ်နာရီမှာ ပုလင်းပေါင်း ၁၂၀ ကနေ ၁၅၀ ထိ ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။
စက်ရဲ့ operating pressure က 0.45-0.6 Mpa ထိရောက်ပါတယ်။ pressure က သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊ဖြည့်ခြင်းနှင့် အဖုံးတပ်ဆင်ပေးခြင်း တွေကို မှန်ကန်စွာလုပ်နိုင်ကြောင်း အာမခံပါတယ်။
စက်ရဲ့အရွယ်အစား(L×W×H):2800×980×1700(mm): အရွယ်အစားမကြီးတဲ့အတွက် VAQGF 150 က နေရာအများကြီး မယူပါဘူး။ inox 304 ဒီဇိုင်းနဲ လုပ်ထားတာကြောင့် စက်က အမြဲတမ်း အရောင်ထွက်နေပြီး သန့်ရှင်းလို့လည်း လွယ်ကူပါတယ်။ စက်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကလည်း ၁၅ နှစ်ကျော် ဖြစ်ပါတယ်။
စက်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအား save တဲ့အနေနဲ့ 1.92 Kw/h စွမ်းအားပမာဏသာ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
VAQGF 150 စက်ဟာ 276×490 အရွယ်အစား ပုလင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
စက်ကိရိယာတွေ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ဖို့ customer တွေက input power 380 V နဲ့အတူ 3-phase ပါဝါအရင်းအမြစ် ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။
VA 3F အော်တို ဘူးတွေပုလင်းတွေကို လောင်းထည့်တဲ့စက်က 225 kg ပဲ ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
Benefits of using VAQGF 150 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine of Viet An company:
Viet An ကုမ္ပဏီမှ3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 150 ၏ ကောင်းကျိုးများ
1. The machine is manufactured using the most modern filling technology of the United States
2. Compact design with 304 stainless steel material make it durable, easy to operate
3. There isasmart control panel that automatically switches off when an incident arises.
4. There isafully automatic PLC control system
5. Filling process ensures food safety and hygiene for jar drinking water
6. With3automatic stages, VAQGF 150 will help businesses save the cost of hiring2workers, which after 1 year, can pay back the capital invested in the machine.
7. Long-term warranty up to 12 months and lifetime maintenance of the machine
၁။ဒီစက်ဟာ US ရဲ့ ခေတ်မီတဲ့ လောင်းထည့်တဲ့စနစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
၂။304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် ကြာရှည်ခံပြီး လုပ်ဆောင်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။
၃။အကြောင်းတစုံတရာရှိတဲ့အခါ အော်တိုပိတ်ပေးတဲ့ control panel ပါရှိပါတယ်။
၄။အော်တို PLC ထိန်းချုပ်စနစ်လည်း အပြည့် ပါရှိပါတယ်။
၅။လောင်းထည့်တဲ့လုပ်ငန်းက အစားအသောက်တွေရဲ့ လုံခြုံမှုနဲ့ သောက်ရေတွေရဲ့ သန့်ရှင်းမှုတွေကို သေချာစေပါတယ်။
၆။အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက အလုပ်သမားတွေငှားရမ်းမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ၁ နှစ်အတွင်းမှာပဲ စက်ဖိုးကြေနိုင်ပါတယ်။
၇။ စက်ရဲ့ ခိုင်ခံ့မှုကို ၁ နှစ် အာမခံပါတယ်။
Price of VAQGF 150 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine of Viet An company
Viet An ကုမ္ပဏီမှထုတ်သော VAQGF 150 ရဲ့ ဈေးနှုန်း
With VAQGF 150 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine with3automatic stages of cleaning, filling and capping at 6900 USD, this price includes transportation and installation in 64 provinces and cities in Vietnam (except for islands).
Besides, when buyingamachine of Viet An company, customers will be consulted on the filling machine in details. Any questions will be answered quickly and accurately by us. Customers who buy the VAQGF 150 jar filling and capping machine will geta1-year product warranty with long-term maintenance along with many attractive gifts and after-sales policies.
We will advise and design the ground, advice on the filling machine production process as well as legal documents to save costs for customers.
In addition, we also support customers to design and print jar labels, connect customers with suppliers of plastic jars, plastic membranes ... as well as consulting and sharing business strategies.
We are committed to providing our customers with the highest quality and most prestigious products, all the machines we provide are certified and tested by the competent authorities. It is our honor to cooperate with you in the near future
သန့်ရှင်းခြင်း၊ဖြည့်ခြင်းနှင့် အဖုံးတပ်ခြင်း စတဲ့အဆင့် ၃ ဆင့်ပါတဲ့ VAQGF 150 စက်ဟာ 6900 USD ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအတွင်း (ကျွန်းတွေမပါ) သယ်ယူပို့ဆောင်ခနှင့် တပ်ဆင်ခ free ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Viet An ကုမ္ပဏီမှ စက်တစ်ခုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် လောင်းထည့်တဲ့စက်အကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မေးခွန်းများကိုလည်း မြန်မြန်နဲ့ မှန်မှန် ဖြေဆိုပေးသွားမှာပါ။ VAQGF 150 ဝယ်ယူတဲ့ customer တွေက 1 year အာမခံရရှိပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ ပစ္စည်းကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လက်ဆောင်တွေနဲ့ after sales ပေါ်လစီတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းတွေ တပ်ဆင်ပုံတွေကိုလည်း အကြံပေးမှာပါ။စက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေနဲ့ တရားဝင် စာချုပ်စာတမ်းတွေအတွက်လည်း အကြံတွေပေးသွားမှာပါ။
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့က customer တွေကို label ဒီဇိုင်းနဲ့ print ထုတ်ပုံတွေ အကြံပေးမယ်။ plastic jars နဲ့ plastic membrane suppliers တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးမယ်။ စီးပွားရေး နည်းဗျူဟာတွေကိုလည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေး မျှဝေပေးမယ်။
ကျွန်တော်တို့က customer တွေကို အလွန်အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော့်တို့ဆီမှ စက်များအားလုံးက အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူကြီးများမှ စမ်းသပ်ထားပြီး တရားဝင်လက်မှတ် ရရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နောင်လည်း customers တွေနဲ့အတူတူ ပူးပေါင်းဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Hotline: +84 839 31 31 31
Viet An supplies VAQGF - 150 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine PRESTIGE - QUALITY - CHEAP.
Viet An ကုမ္ပဏီမှ အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာသော3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 150 များကို ထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။
Detailed configuration of VAQGF 150 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 150 ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ အသေးစိတ်
Technical specifications of VAQGF 1503in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 150 ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
A. VAQGF 1503in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine, REQUIRED STAGES
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 150 ၏ လိုအပ်သော အဆင့်များ)
Extraction head(ထုတ်ယူရသောခေါင်း) 1
Capacity (KW)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 1.9
Pressure (Mpa)( ဖိအား) 0,45-0,6
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 2800x980x1700
Weight (Kg)( အလေးချိန်) 225
B. VAQGF 1503in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine, OPTIONAL STAGES
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 150 ၏ ရွေးချယ်စရာ အဆင့်များ)
Model Price (USD)( ဈေးနှုန်း)
1. Automatic cleaning inside and outside of the jar, automatic decapping machine BS-1
(အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ (ပုလင်းများအတွက်) CSSG4)
Hỏi đáp & đánh giá ဘူးတွေ ပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက် VAQGF 1503IN 1